Akụkọ - Isi Echiche
Otu n'ime ihe mbụ ị ga -echebara echiche bụ nchekwa. Ọ dị mma na ị nwere akụrụngwa n'ụlọ? Kedu ka ahụike gị dị? Ị nwere ụmụaka? Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ahụike, lelee dọkịta gị wee hụ na iwebata mmemme ọzụzụ ọhụrụ dị mma maka gị. Ụfọdụ akụrụngwa dị mkpa; tụlee ma ọ ga -adị mkpa ka ị na -ebugharị ya mgbe niile, n'ihi na nke a nwere ike bụrụ nrụgide n'ahụ gị. Ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume, buru ụzọ nwalee ya (ma ọ bụ akụrụngwa yiri ya) tupu ịzụta. Ọ nwere ike ịba uru ịrịọ echiche nke onye na -enye ọzụzụ tupu ịme ya.
Kpachara anya maka asịrị
Kpachara anya maka ihe ndị mmadụ na -ekwu na akụrụngwa mgbatị ahụ, ọ bụghị ihe niile dị mma. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ahụmịhe ọjọọ site na iji otu ngwa wee zere ụdị niile. Ụfọdụ ndị mmadụ na -etolite echiche ha dabere naanị n'ihe ha nụrụ. Ihe ngwọta kacha mma bụ ime nyocha gị ma ọ bụrụ na enwere obi abụọ, kpọtụrụ anyị tupu ịzụta.
N'ezie, ịkwesịrị ịtụle ohere ị nwere n'ụlọ. Ụfọdụ ndị na -azụ ahịa na -echefu echiche a dị oke mkpa. Tụlee ebe ị ga -etinye akụrụngwa ahụ tupu ịzụrụ. Ụlọ gị nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnabata akụrụngwa. Na -eme atụmatụ ma hụ na igwe ga -adaba nke ọma na oghere ị nwere. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ kpọtụrụ anyị, anyị nwere ike nye gị ndụmọdụ na oghere dị mkpa maka ụdị akụrụngwa ọ bụla.
Kedu ihe bụ mmefu ego gị?
Na -atụle ego ole ị nwere na ego ole ị dị njikere ịkwụ maka akụrụngwa. Anyị na -akwadokarị itinye ego na akụrụngwa kachasị mma ị nwere ike imeli n'ihi na ị ga -etinyekwu uche na ịzụrụ ihe, ị ga -enwekwa ọ enjoyụ akụrụngwa ahụ karịa. Ụfọdụ na -akwado ịzụrụ ọnụ ala ebe ọ bụ na ọ nweghị obere ihe egwu, mana mgbe mgbe ịzụrụ ọnụ ala, ị ga -enwe ahụmịhe dara ogbenye, ị ga -akwakwa ụta maka ịzụrụ ya.
Ị chọrọ ya?
Nke a bụ ajụjụ dị oke mkpa. Ngwa ahụ ọ dị mkpa? Ọ dabara ihe mgbaru ọsọ ahụike gị, mmemme ị chọrọ ime, akụkụ ahụ ị na -elekwasị anya ma ọ bụ ndụmọdụ ọ bụla enyere? Mmega ahụ kwesịrị ịbụ ihe ịma aka mana ọ na -atọ ụtọ. Ọbụna akụrụngwa kacha mma ga -arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị na -eji ya mgbe niile! Ọtụtụ akụrụngwa mgbatị ahụ anyị dị ọtụtụ, yabụ ị nwere ike ịchekwa ego site na ịzụrụ ihe nwere njirimara karịa ịzụta ọtụtụ ihe nke arụ ọrụ.
Gbalịa tupu ịzụrụ
Tupu itinye ego na akụrụngwa ọ bụla, buru ụzọ gaa na mgbatị ahụ wee nwaa otu ngwa ahụ iji hụ ma ọ na -atọ gị ụtọ iji ya. Ọ bụchaghị ngwaọrụ York Fitness, ebe ọ ka ga -enye gị echiche maka mmegharị na ojiji. Ọtụtụ mgbatị ahụ na -enye nkwụsị maka nnọkọ maka obere ego, na -enye gị ohere ịnwale ngwa ngwa dị iche iche n'otu nnọkọ.
Tụlee ịkpọ ọrụ ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịkpọ ọrụ ndị ahịa anyị. Ndị otu York Fitness maara nke ọma na akụrụngwa anyị niile ma nwee ike ịnye gị ụfọdụ echiche dị mma gbasara otu esi echekwa ego wee nweta ihe kachasị na mgbatị ahụ ụlọ gị. Ebumnuche anyị bụ inye gị ahụmịhe kachasị mma enwere ike mgbe ịzụtara anyị akụrụngwa ahụike.